Mareykanka oo duqayn ka dhan ah Al-Shabaab ka geystay gobolka Banaadir - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo duqayn ka dhan ah Al-Shabaab ka geystay gobolka Banaadir
August 11, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka. [Sawirka: Archive]
Garowe-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa qaaday duqayn ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay bayaan ku sheegtay waaxda Difaaca Mareykanka.
Howlgalka ayaa ka dhacay gudaha gobolka Banaadir ee koonfurta Soomaaliya, sida ay sheegeen Mareykanku.
Bayaanka dhexdiisa, Mareykanka ayaa ku sheegay in ay wadaan qiimaynta natiijada howlgalka ayna bixin doonaan faahfaahinta warbixinta sida ugu habboon.
Dabayaaqadii bishii July, Mareykanka ayaa duqayn ku dilay hoggaamiye sare oo katirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab oo la dhaho Cali Maxamed Xuseen loona yaqiin Cali Jabal, duqayntaas ayaa ka dhacday deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeellaha Hoose.
June 19, 2017 Maxkamada ciidamada Soomaaliya oo askari ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii lagu helay dilkii Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib-u-dhiska
Suicide bomber kill police officer in Mogadishu
Kufsiyo ka dhacay xerada barakacayaasha Shabeelle oo kutaala magaalada Garoowe
Gaorowe-(Puntland Mirror) Kiisas kufsi ah ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhaceen xero ay ku noolyihiin barakacayaal oo kutaala gudaha magaalada Garoowe. Sida ay sheegeen ilo-wareedyadu, kufsigii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay xerada barakacaayasha [...]
Shir-weyne ku saabsan Soomaaliya oo ka furmay magaalada Brussels
Brussels-(Puntland Mirror) Shir-weyne ku saabsan Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah ka furmay magaalada Brussels ee dalka Belgium. Shirka ayaa waxaa ka qeybgalay wufuud ka socota Soomaaliya oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo [...]